Guddiga kala dhiman ee Doorashooyinka oo diyaariyay Goobaha Doorashada. | Banaadir Times
HomeUncategorisedGuddiga kala dhiman ee Doorashooyinka oo diyaariyay Goobaha Doorashada.
Guddiga kala dhiman ee Hirgelinta Doorashooyinka heer Federaal & xubno katirsan Guddiga Amniga Doorashooyinka qaabilsan ayaa kormeeray Xarunta Gaadiidka Booliiska oo ay qorsheeyeen in ay ku qabtaan Doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi & Banaadir.
Guddiga ayaa ku adkeysanaya dhaqangelinta Jadwalkooda cusub, xili Ra’iisul Wasaaradaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in Xukuumaddiisu diyaar u tahay in xaliso cabashada xubnaha qaar ee Gudiga ku jira.
Hadalkaas Ra’iisul Wasaare Rooble & dhaq-dhaqaaqa Guddiga kala dhiman ee Doorashooyinka ayaa muujinaya in uusan caga badan ku taagneen go’aankaas, maadaama cabashada oo taagan uu Guddiga sii wato howshiisa.
Haddaba, Xukuumadda Soomaaliya maka go’an tahay xal ka gaarista cabashada ka timid hab dhismeedka Guddiga kala dhiman ee Doorashooyinka heer Federaal?
Previous articleShir looga go’aan gaarayo Doorasho Dadweyne oo ka dhacda Soomaaliya oo maanta ka furmaya Garoowe.
Next articleShacab ku dhintay Qarax haleelay Gaari ay la socdeen!